Atụmatụ Poseidon Tattoo | Igbu egbugbu
Ogbugbu nke Poseidon, chi nke oke osimiri
Na Cerezo | | Ogbugbu, Echiche antgha
Taa, anyị chọrọ ịkọrọ gị ihe gbasara egbugbu Poseidon, atụmatụ nke nwere ike iyi ka ọ naghị ama gị, ọ bụ ezie na enwere ebe ọ dị.
Anyị na-ekwu maka igbu egbugbu nke Poseidon ma ọ bụ Neptune dabere na ọdịbendị (Latin ma ọ bụ Greek), ọ bụ akara nke mmiri, oké osimiri na oké osimiri. Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'oké osimiri na-ahọrọ ihe a maka ha chi egbugbu, dị ka ihe nnọchianya nke nchebe maka ha.
1 Nnukwu azụ na Olympus
2 Gịnị ka egbugbu a nwere?
3 Echiche egbugbu Poseidon
3.1 Oke osimiri, alaeze Poseidon
3.2 Mermaids na ndị ọzọ akụkọ ifo bi n'oké osimiri
3.3 Dolphin, ebe zoro ezo nke oké osimiri
3.4 Nyịnya, ihe nnọchianya ya ọzọ
3.5 The trident, ya nnukwu akara
3.6 Triton, nwa Poseidon
3.7 Nepwa Neptune
3.8 Akwụkwọ maka Odyssey
3.9 Na n'ezie Poseidon
Nnukwu azụ na Olympus
Poseidon bụ otu n’ime chi iri na abụọ nke Olympia, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu égbè na Parthenon. Ọ bụ nwanne nwoke Zeus, onye na-elekọta ala na ikuku. Poseidon, n'aka nke ọzọ, ga-abụ onyenwe nke oke osimiri. Kama nke ahụ, Hedis, nwanne nwoke nke atọ nke ezinụlọ a, bụ onye na-achị ala mmụọ.
Na mgbakwunye na oké osimiri, a na-asọpụrụ Poseidon dị ka chi nke ala ọma jijiji, ya na onye nwere anwansi ya nwere ike ime ka isi iyi na-apụta ebe ọ bụla ọ chọrọ ma kpọọ oké ifufe. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ọ bụ chi nke oké osimiri, Poseidon họọrọ njem site n'ụgbọ ịnyịnya karịa ụgbọ mmiri, na-adọta mgbe niile site na nnukwu anụ ọkara ịnyịnya ọkara agwọ.
Ke adianade do, Poseidon bụ mpako nwe otu agwaetiti na-aghọ akụkọ ifo: na Atlantis.
Gịnị ka egbugbu a nwere?
na Ogbugbu Poseidon na-achọ inweta nchedo nke chi a, bụ onye mgbe ọ dị mma inye mmụọ oké osimiriỌ bụ ya mere ọ ji bụrụ atụmatụ nke ndị na-arụ ọrụ n'oké osimiri nwere ekele maka ya. Na mgbakwunye, ya trident na-agbakwunye uru na ihe ọ pụtara, ebe ọ bụ na onye ọhụụ ahụ bụ akara nke nkwekọ, uche, ahụ na mmụọ, yana n'oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu. Ọ dị mma? Mụ onwe m hụrụ ihe nnọchianya ya n'anya.
Echiche egbugbu Poseidon
Ka anyị hụ ụfọdụ atụmatụ nke chi a, Poseidon na akpukpo aru anyi.
Oke osimiri, alaeze Poseidon
Oké osimiri na-aga ogologo oge na egbu egbu. O doro anya na ọ ga-abụ atụmatụ nke Poseidon n'onwe ya ga-ahọrọ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ igbu egbugbu. Iji kọwaa ya na chi, ị nwere ike igosi ya ka o si na mmiri pụta, ma ọ bụ naanị ihe ntanetị (odo nke ọla na acha anụnụ anụnụ nke oke osimiri dị ịtụnanya). Iji gosi oké iwe ya, ọ na-ahọrọ oké osimiri na-asọ asọ ma ọ bụ ọbụna mmiri na-agba gburugburu n’etiti mmiri ahụ.
Mermaids na ndị ọzọ akụkọ ifo bi n'oké osimiri
N'ezie, ndị mermaids adịghị ka anyị si mara ha n'oge gboo, kemgbe ha nwere aru anu-ufe n'ọnọdu ọdụ (E tinyekwara ọdụ ahụ na akụkọ mgbe ochie ruo mgbe ọ bụla ma ọ bụ ihe na-erughị Middle Ages). Ọzọkwa, ha enweghị mmekọrịta ọ bụla na Poseidon, ebe ha sitere na chi ndị ọzọ. Agbanyeghị, ịbụ onye ama ama bi na oke osimiri, enwere ike ịnwa gị ịmewe ihe ga-eme ka ha bụrụ ndị mbido.
Dolphin, ebe zoro ezo nke oké osimiri
Dolphins nwere njikọ a na-atụghị anya ya na Poseidon, ebe ha bụ ndị na-akwado otu akụkọ akụkọ ama ama ya, nke akọwa mbido igwe kpakpando Dolphin (Ọ bụ ezie na ị gaghị achọ igbu egbugbu mgbe ị zutere ya).
Akụkọ mgbe ochie nwere na Amphitrite, bụ Nereid, zoro na Atlantis iji gbanahụ Poseidon, bụ onye chọrọ ịlụ ya. Otú ọ dị, otu n'ime ndị mmụọ na-eso chi, a dolphin, hụrụ ya n'otu n'ime agwaetiti Atlantis o wee kpọta ya n’ihu chi ahụ, bụ́ onye nwere obi ekele, nke nyere dolphin ebe n’etiti kpakpando.
Nyịnya, ihe nnọchianya ya ọzọ
Ọ bụrụ n’ịche n’enweghi onye ga - eti gị ihe n’ọchịchịrị, iji hụ ma ị ga - anwa egbugbu ịnyịnya ma gwa ndị mmadụ na ọ bụ n’ezie maka Poseidon, onye na - echekwa inyinya, onye hụrụ ha n’anya nke ukwuu nke na o ji ịnyịnya kwaga n’oké osimiri. (ọ bụ ezie na ọtụtụ na ọdụ ọdụ mmiri, a ghaghị ikwu ya). N'ezie, N’oge ochie, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-achụ ịnyịnya n’àjà site n’ime ka ha daba n’oké osimiri ka ha nwee njem dị nchebe. Ọ bụrụ n'ịhọrọ otu n'ime ndị a, n'ezie, ọ nweghị onye ga-eti ihe mbụ.
The trident, ya nnukwu akara
Anyị ekwuolarị Poseidon's trident, nnukwu akara nke chi a. Site na ya ọ nwere ike ịkpọ oke mmiri ozuzo ma pupụta isi mmiri. Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-adị ya ka ọ gba ọtọ na-enweghị ya, yabụ nke kachasịsị bụ ịhụ ka ya na ya na-esonyere. Agbanyeghị, ịnwere ike ịhọrọ atụmatụ dị mfe karị, ya na onye trident naanị, dịka ọmụmaatụ.
Triton, nwa Poseidon
Dị ka chi niile nke mgbe ochie, Poseidon nwere ọtụtụ ụmụ, ọ bụ ezie na ikekwe onye kachasị ama bụ Triton, bụkwa nwa onye Amphitrite dara ogbenye, onye Nerea anyị kwuru maka ya na mbụ. A na-anọchite Triton dị ka mermaid, ya bụ, na ọdụ azụ na ahụ mmadụ, ọ bụ ezie na ndị nnọchi anya ndị ọzọ na ọdụ lobster ma ọ bụ ọbụna mbo aka abụghị obere.
Ọ bụrụ na ihe gị bụ akara aka Poseidon nke na-ezo aka na chi n'ụzọ gbara ọchịchịrị (mana ị mechara amasị echiche ịnyịnya), ewela iwu na ịnọchite ya site na mbara ụwa ya, Neptune, nke weputara aha ya site na Latin nke Poseidon. Ọ na-adị mma na obere egbugbu nwere agba bluish mara mma.
Akwụkwọ maka Odyssey
Ị maara nke ahụ Poseidon bụ ihe kpatara Ulysses dara ogbenye enweghị ike ịla n'ụlọ? Chi ahụ were oke iwe nke na ọ mara ya ikpe ịgagharị n'oké osimiri ruo ọtụtụ afọ. Ya mere, otu ụzọ dị iche iche icheta chi a bụ site na-eme ka a na-ezo aka a kpochapụwo akwụkwọ, ihe zuru oke ngọpụ itinye a see okwu na Greek.
Na n'ezie Poseidon
N’etiti egbugbu Poseidon, n’ezie, nkọwa banyere chi n’onwe ya enweghị ike ịnọ. Na-anọchite ya iwe ma ọ bụ obi ụtọ, n'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ezigbo echiche mgbe niile iso ya na onye ntụkwasị obi ya kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ mara mma nke ọma n'ụdị dị mma, na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-eweghachi ịma mma nke oke osimiri.
A na-eji mmụọ nke ogwe aka mee ka egbu egbu egbu Poseidon, nri? Gwa anyị, gịnị bụ ọkacha mmasị gị imewe? Ọ dị gị ka agbaghara nke ọ bụla? Cheta ịgwa anyị na nkwupụta!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Echiche antgha » Ogbugbu nke Poseidon, chi nke oke osimiri